Ithegi: ukuba ishishini lakho libe kwi-twitter
Kutshanje, i-Twitter ityhila ukuba ukudityaniswa kwe-Apple ngokuqinileyo kwe-Twitter kukonyuse ukusayinwa kwe-twitter ngama-25%. Emva kweminyaka yokuyiphepha, ndaye ndophuka ndaza ndafumana i-iPhone… ndiza kubhala malunga nayo kamva. Ndiyakuthanda ukudityaniswa okuqinileyo kwi-iPhone kunye ne-Twitter-ndicinga ukuba ndithandana ne-Twitter kwakhona! Ngaphezulu kwe-100 yezigidi zabantu baye bathontelana kwi-Twitter ukusukela ngo-2006, babelana ngamabali, ukuqonda, kunye nemifanekiso yekati. Kodwa
NgoMgqibelo, Novemba 10, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abantu abangaphezulu kwePackt Publishing babeneposti yamva nje apho babekhuthaza abaphuhlisi be-PHP / iibhlog ukuba bafunde incwadi entsha kunye nebhlog yayo. Ndiyawaxabisa kakhulu amathuba anje- -ukungakhange ucele nakuphi na ukuthunyelwa okuhle okanye okungalunganga, uphononongo oluthembekileyo lwencwadi abayinikezelayo (ngaphandle kwendleko). Incwadi endiyifumeneyo yiCodeIgniter yoPhuculo lweSicelo sePPP, ebhalwe nguDavid Upton. Incwadi yam endiyithandayo kwi-PHP / MySQL iseyi-PHP